मङि्सर ०३, २०७५ रासस
काठमाडौँ, नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री डा शशाङ्क कोइरालाले जात जातिलाई भन्दा युवा पुस्तालाई राजनीतिमा आरक्षण दिइनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
सुशील कोइराला मेमोरियल फाउन्डेसनले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘म र साहित्य’ विषयक छलफल कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दैै उहाँले ६० प्रतिशत भन्दा बढी ४० वर्ष मुनिका युवा भएपनि राजनीतिमा उपयुक्त अवसर पाउन नसकेको बताउनुभयो ।
“पार्टीमा रक्तसञ्चार गराउन युवालाई अघि सार्नुपर्छ, पुराना नेतासँग अनुभव हुन्छ, अनुभव ग्रहण गर्दै युवा राजनीतिमा सक्रिय हुनुपर्छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “पार्टीको केन्द्रीय समिति, विभाग र अन्य तहमा युवालाई अघि बढाउनुपर्छ ।” दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले ठोस योजना ल्याउन नसकेको उहाँको आरोप छ । उहाँले सामाजिक सञ्जालमा भन्दा युवा, विद्यार्थीको सक्रियता साहित्यिक कृति पढ्नमा समय दिन सुझाउनुभयो ।
महामन्त्री कोइरालाले आदेश आचार्यले लेख्नुभएको ‘पारानोइया’ पुस्तकको विमोचन गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा साहित्यकारहरु भुवन ढुङ्गाना, तोया गुरुङ, रामकुमार पाँडे, धीरेन्द्र प्रेमर्षि, नायिका मनीषा कोइराला, फाउन्डेसनका सचिव अतुल कोइराला लगायतले सामाजिक सञ्जाललाई किताबको विकल्पका रुपमा प्रयोग गर्नुनहुनेमा जोड दिनुभयो ।
प्रकाशित : सोमबार, मङि्सर ०३, २०७५१७:४५
आज तुलसीको विवाह र विशेष पूजा गरी हरिबोधनी एकादशी पर्व मनाइयो !
कायममुकायम न्यायाधीश जोशीले तोके आजका इजलास
युद्धको क्रममा नेपाली सेनाले अंग्रेजलाई हराएको ठाउँमा पुगे प्रधानसेनापति थापा ! [तस्विर सहित]
के तपाईको आँखा सुख्खा हुँदा माछाको तेल प्रयोग गर्नु हुन्छ?
फेरी गयाे भूकम्पकाे धक्का
किनमेल गर्न जादाँ बेपत्ता भएकी कविताको हत्या गरिएको अवस्थामा शव फेला
निर्मला पन्तका हत्यारा पत्ता लगाउन काङ्ग्रेसले दवाव दिँदै आएको छ – विश्वप्रकाश शर्मा